SS fantsona fantsona | Gripa Pipe
Famatsiana fantsom-pira SS
Izahay no laharana voalohany ao amin'ny boaty fampidirana anao, manome ny vaovao manandanja indrindra amin'ny fampiroboroboana anao ny indostria ary dingana iray alohan'ity tsena miova haingana sy mifaninana ity.
Mahatratra 40% amin'ireo fantsom-pitrandrahana herinaratra no fantsom-panafody eto an-tany. Ny fisafidianana ny fomba fifandraisana mety dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ny fahombiazany ary hanana goavana ny fiatraikany amin'ny tombony ara-toekarena amin'ilay tetikasa manontolo.
Ny indostrian'ny famokarana herinaratra any Etazonia dia mivoatra haingana, ary miova koa ireo orinasa manangana sy mitantana ny foibe famokarana herinaratra. Mihabetsaka ny isan'ny tobin-tsolika voajanahary ary mitombo ny isan-jaton'ny mpamokatra herinaratra eto amin'ny firenena. Ireo loharano angovo azo havaozina toy ny rivotra, masoandro ary herinaratra dia mampiasa entona voajanahary ho toy ny angovo.
Androany, ny vidin'ny akora ambany dia namorona lamina iray ahafahan'ny loharanon-tsolika marobe mitovy, ary ny loharanom-angovo azo havaozina dia lasa malaza tsikelikely. Ny vokatra miharihary amin'ny fifindrana mankany amin'ny gazy voajanahary sy ny angovo azo havaozina dia ny fananan'i Etazonia fantsona angovo mahery vaika lavitra noho ny teo aloha. Taona vitsy lasa izay, ny arintany dia nampiasa herinaratra teo ho eo amin'ny 75%. Ankehitriny, latsaky ny 35% ny toby famokarana herinaratra no mampiasa arintany.
Ny lafiny maritrano amin'ny famokarana herinaratra dia niatrika fanovana ihany koa, ary ireo fiovana ireo dia nisy fiantraikany tamin'ny fampiharana ny taranaka vaovao sy ny fanavaozana. Folo taona lasa izay, ny fifanarahana injeniera, ny fividianana entana ary ny fananganana (EPC) dia niseho tao amin'ny indostrian'ny famokarana herinaratra. Amin'izao fotoana izao, mahazatra ny fifanarahana EPC, ary mihamaro ny orinasa manome ny fandefasana tetikasa EPC amin'ny vidiny raikitra ao anatin'ny tontolon'ny fifaninanana.
Ny fitadiavana fomba hampihenana ny ora fiasana eo an-toerana sy hampitomboana ny fahombiazan'ny fananganana dia lasa ampahany amin'ity fomba vaovao ity. EPC dia mamorona famolavolana turnkey izay afaka "manapaka sy mametaka" amin'ny asa ho avy mba hanome vahaolana mety. Ny fahombiazan'ny fampiharana ireo fepetra ireo dia nahatonga ny fihenan'ny fandaharam-potoanan'ny tetik'asa, izay nanova maharitra ny andrasan'ireo tompona fananana. Androany, azo atao ny mamita tobin-jiro misy entona entona ao anatin'ny roa taona sy tapany, raha oharina amin'ny dimy taona lasa izay vao taona vitsivitsy lasa izay. Midika izany fa ny orinasa dia afaka mamokatra herinaratra ary mampisy vola amin'ny antsasaky ny fotoana.
Raha ny fahitan'ny tompony azy, ny fanapaha-kevitra ny hanomezana tetikasa matetika dia miankina amin'ny orinasa iza no afaka manangana ny orinasa haingana indrindra sy manana kalitao tsara indrindra, ary vetivety dia mifindra amin'ny famokarana sy ny fidiram-bola. Ho an'ny orinasam-pananganana dia mampitombo ny tsatoka izany ary manome tombony mifaninana amin'ireo orinasa afaka mamaly drafitra maika.
Na dia maro aza ny fanovana natao tamin'ny indostrian'ny famokarana herinaratra, dia nisy zavatra tena manandanja ihany. Ho an'ny orinasam-pananganana dia manantena foana ny olona hanome fiarovana, fahombiazana, fahamendrehana ary kalitao. Na inona na inona fanamby atrehin'ity tetikasa ity dia manantena ny tompona fa hahatratra ny vokatra ara-potoana sy ara-bola ny orinasa mpanao fanorenana nefa tsy hanimba ny iray amin'ireo fepetra lehibe takiana ireo.
Ny tompona orinasa mpamatsy herinaratra dia mandray fanapahan-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'ny tetikasa vaovao sy haverina, ary orinasa mpamokatra herinaratra maro no mampiasa entona voajanahary ho solika. Raha ny angon-drakitra avy amin'ny US Energy Information Administration, izay nanangona andiana data avy amin'ny indostrian'ny herinaratra amerikana, ny salan'isan'ny vidin'ny famokarana angovo voajanahary tamin'ny taona 2017 dia sahabo ho 920 $ / kW. Somary avo kokoa noho ny vidin'ny fananganana toby famokarana herinaratra entin'ny solika solitany izy io, saingy mora vidy kokoa noho ny fananganana orinasam-pamokarana entin'ny angovo azo havaozina.
Ny fifandraisana amin'ny fantsom-pifandraisana any ambony dia mitovy amin'ny welding. Na iza na iza nandray anjara tamina tetikasa anisan'izany ny welding dia mahalala fa mitondra olana ny welding. Ny fahazoan-dàlana miasa mafana dia tsy maintsy alaina alohan'ny hanombohana asa, ary ny fantsom-batana dia mitaky mpiasa mahay, izay tsy mora raisina foana, indrindra amin'ny tsenan'ny asa mafy ankehitriny. Ankoatr'izay, satria miankina amin'ny toetr'andro ny famafana, ny fepetra henjana dia hampiadana ny fandrosoana. Amin'ny toe-tany maina sy be rivotra, ny welding matetika dia mitaky fanaraha-maso ny afo, midika izany fa misy mpiasa fanampiny tsy maintsy alefa eny an-toerana ary mety hiteraka fahavoazana.
Raha tokony hijanona amin'ny asa fanao matetika, dia mety ho tombony kokoa ny manitatra ny harato kokoa ary mieritreritra ny hampiasaina amin'ny fametahana tapa-mekanika fa tsy hangeja. Ho an'ny fantsom-pitaovana ampiasaina amin'ny rano fisotro, rano mangatsiaka, rafi-drivotra, glycol ary rafitra azota, ireo fantsona ireo dia mety mitentina 30% ka hatramin'ny 40% amin'ireo singa fantsona ao amin'ity asa ity, ary ny fampiasana ireo lozisialy mekanika mitete (sary 1) dia mety Mitarika amin'ny fitehirizana vola.
1. Ny fitambaran'ireo milina maloto dia afaka mamonjy vola be ary manatsara ny fahombiazan'ny fantsom-bahoaka amin'ny tany. Fanajana: Victaulic
Ny fametahana mekanika mihombo dia tena mahazatra ny ankamaroan'ny orinasa EPC sy ny fananganana. Nandritra ny taona maro, olona maro no nampiasa an'ity haitao ity tamin'ny rafitra fiarovana, fanafana, rivotra ary rivotra (HVAC). Ireo mpandraharaha dia mazàna mampiasa ireo takelaka ireo hampitomboana ny hafainganana sy ny fahamendrehana ary hanatsara ny fiarovana. Ny fametrahana ny tsikombakomba dia tsy mitaky fampiasana asa mafana na fahazoan-dàlana mafana, noho izany ny mpametraka dia tsy ho azon'ny setroka na ny lelafo, ary tsy ilaina ny miatrika ny fitoeran-drano, fanilo na firaka mandritra ny dingan'ny fametrahana.
Ny fitantanana ny mpiasa dia ampahany lehibe amin'ny tetik'asa fananganana rehetra ary ny tsirairay amin'ny sehatry ny fananganana dia tsy maintsy miatrika ny tsy fahampian'ny mpiasa mahay. Any Amerika Avaratra, sarotra ny fahitana olona marina manana fahaizana takiana, ary ny tsy fisian'ny mpiasa dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fandaharam-potoanan'ny tetikasa.
Androany, ny tsy fahampian'ny mpiasa any Amerika Avaratra dia matotra kokoa noho ny hatramin'izay, ary tsy misy vahaolana amin'ity olana ity. Ny tena izy dia raha misy mpiasa tsy an'asa amin'ny hetsika lehibe toy ny welding, dia ho be ny fiatraikany amin'ny tetikasa.
Ny fampiasana fikajiana matevina mekanika dia fomba vaovao sy mahomby. Raha ampitahaina amin'ny famafana, ity teknolojia ity dia manana tombony satria tsy mila fanodinana hafanana, tsy misy fahazoan-dàlana mirehitra, tsy misy famataran'afo sy taratra X, ary ny famolavolana tsotra ny fitaovana fitambarana dia azo apetraka amin'ny fampiasana fitaovana mahazatra.
Tamin'ny tetik'asa vao haingana dia maherin'ny 120 ny fitters fantsona nampiofanina hametraka tonon-taolana vita amin'ny mekanika ao anatin'ny 20 minitra. Ity ekipa mpanamboatra fantsona ity dia afaka manatanteraka haingana ny tetikasa iray manontolo tsy misy lozam-pifamoivoizana. Amin'ny salan'isa, na ho an'ny vao manomboka aza, ny fametrahana ny rafitra mekanika slotting dia 50% ka hatramin'ny 60% haingana kokoa noho ny welding (sary 2).
2. Raha ampitahaina amin'ny welding, ny fotoana fametrahana ny tonon-taolana mekanika slotted dia haingana sy mahomby kokoa. Fanajana: Victaulic
Tombony iray hafa amin'ny fampiasana fitadiavana alika mekanika ny rafitra izay azo alefa mialoha, izay tsy vitan'ny manome ny tsy fitovizan'ny vokatra, fa mamonjy fotoana koa satria azo apetraka ao amin'ny toeram-pananganana ny spool. Raha ampitahaina amin'ny fivorian'ny eo an-toerana, ny prefabrication dia afaka mamonjy vokatra bebe kokoa ary manatsara ny fiarovana.
Ilaina ny fametrahana mazava tsara amin'ireo singa ao amin'ny toby famokarana herinaratra, izay iray amin'ireo antony mahatonga ny fiantohana ny fiofanana sy ny fahaizan'ny mpampita vy tena zava-dehibe. Sarotra ny manavaka ny kalitaon'ny lasoka vita amin'ny alàlan'ny fandinihana, ary na ny fitsapana na ny taratra X aza dia tsy afaka mamantatra lasitra malemy foana. Ny fanaovana lasitra tsy mety dia mety lafo be, mitarika fatiantoka ara-batana sy ara-bola matotra rehefa mandeha ny fotoana.
Ny fisehoan'ny fametahana slotted mekanika dia azo zahana, manamora ny fanaraha-maso ny kalitao ary ahafahan'ny installer manana fahaiza-manao fototra hanamarinana fa napetraka tsara ny mpiray. Io dia manafoana ireo antontan-taratasy fanaraha-maso kalitao hafa takiana amin'ny fizahana welding, ao anatin'izany ny fitsapana X-ray sy / na ny penetrant dye.
Mora ihany koa ny mitazona ny tonon-taolana mekanika. Araka ny fomban-drazana dia mandany fotoana sy lafo kokoa ny fanamboarana ireo tonon-tariby. Na izany aza, ny fanoloana ny tonon-taolana vita amin'ny mekanika dia mora toy ny fametrahana azy ireo, ary satria saika ny olona rehetra miasa amin'ny toby famokarana herinaratra dia azo zarina hanolo azy ireo ao anatin'ny minitra vitsy, ny fitehirizana vola be dia azo tratrarina rehefa mandeha ny fotoana (sary 3). Raha heverina fa orinasa mpamokatra herinaratra 1 000 MW mahazatra dia afaka mampidi-bola $ 1 tapitrisa isan'andro, ny famerana ny fotoana ahafahan'ny foibe famokarana herinaratra ivelan'ny herinaratra na amin'ny fahafaha-miasa feno dia mety hitondra tombony lehibe.
3. Raha ampitahaina amin'ny vahaolana welding, ny fampiasana ny vahaolana Victaulic dia mety hahatonga ny mpiasa hahomby kokoa. Fanajana: Victaulic
Ny fametahana gazy mekanika dia nampiasaina nandritra ny taona maro tamin'ny fampiharana zavamaniry herinaratra marobe amin'ny tobin-tsolika avo lenta. Ity teknolojia ity dia nampiasaina nandritra ny 100 taona mahery ary manana firaketana azo antoka.
Nandritra ny fotoanan'ny famonoana zavamaniry henjana ho an'ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra any New Jersey, ny famahanana vahaolana mekanika dia namela ny fametrahana rafitra fiarovana rano sy fiarovana vaovao ao anatin'ny fotoana tery mafy. Tao amin'ny orinasa iray tany Pennsylvania, dia nampiasaina ny fametahana alàlan'ny mekanika nanaparitaka ny tsipika rivotra sy ny zotram-piaramanidina mba hahatratra ny fandaharam-potoana fanamboarana haingana; torak'izany ihany koa, ny orinasa iray any Arkansas dia nampiasa rivotra entona, rivotra voafehy noho io antony io ihany. Ity haitao ity dia ampiasaina amin'ny tsipika rivotra, rano miovaova ary fantson-drano mangatsiaka. Ao amin'ny tetik'asa fanovàn'ny toby famokarana herinaratra any Alaska, tsy avela eny an-toerana ny asa ambony ny hafanana ary tsy ampy ny mpiasa mahay. Ny rafitra dia mampiasa rafi-pifaneraserana mikitroka mikitroka mba hanatsarana ny rafitra fanampiny ho an'ny famatsian-drano turbinin'ny setroka, noho izany manome vahaolana.
Toy ny sehatra maro hafa, ny sehatry ny fananganana dia iharan'ny tsindry ihany koa mba hampitombo ny fahombiazany sy hitsitsiana ny vidiny. Io dia mitaky fitakiana avo kokoa amin'ny tompona, EPC ary mpifanaraka. Ankehitriny mihoatra ny hatramin'izay dia ilaina ny manombatombana sy mampiasa fomba vaovao hanatanterahana am-pahombiazana ireo tetik'asa teti-bola na teti-bola.
Rehefa voafetra sy mikorontana ny toe-tsena, dia tena zava-dehibe ny manome vahaolana azo antoka. Na dia toa tsy mahomby aza ny fanatonana fomba hafa amin'ireo toe-javatra sarotra ireo, raha ny tena izy, amin'ity tranga ity, ny vahaolana nentim-paharazana dia mety ho ny sakana lehibe indrindra. Tsy misy fotoana tsara kokoa noho izao mba hieritreretana ny fampiasana ny rafitra fampifangaroana fantsom-panafody Victaulic ivelan'ny fefy. ■
—Dan Christian dia injeniera miorina amin'ny angovo sy solika ao amin'ny Victaulic ary talen'ny tsena herinaratra manerantany, raha i Chris Iasielo, PE dia manam-pahaizana momba ny famokarana herinaratra Victaulic.
Iray amin'ireo tetik'asa lehibe mifehy ny herin'ny masoandro (CSP) manerantany izay mampiasa heliostat “Stellio”…
Ny famitana ny fanombohana sy ny fanendrena ny toby famokarana herinaratra dia mazàna midika hoe fanosehana ny mpifanaraka amin'ny jeneraly hamono ny ambiny rehetra…
Ho an'ny tompona sy ny mpamorona toby famokarana herinaratra, mety ho sarotra ny manapa-kevitra momba ny tsingerina tsotra na ny tsingerina mitambatra…